Monday May 30, 2016 - 08:58:24 in Articles by Super Admin
Gudoomiye ku xigeenka gudigga khaadleeyda Mr Cabdullahi Afrax Siyaad oo ah isku xiraha Wasiiru dowlaha Maaliyadda gudigga wuxuu qaabilsan lacag qabashadda shatiyadda ama Leesinadda,iyadoo qofkii u baahan shati shaqo uu ka qaado laba kun iyo shan boqol oo dollar halka Wasaaradda Ganacsigga ay sharciyan shatiyadda qaado kun iyo todobo boqol dollar. iyadoo halkaas calaa diyaarad u saaran tahay 800$.
Shirkaddaha Khaat-ka keeno Xamar maalin walba waxeey gaarayaan 38 Shirkadood.
Mr Afrax wuxuu lacagta shati aruurinta ka helay 30400$, [soddon kun iyo afar boqol oo dollar]
Mr Cabdi Manaan wuxuu gudigga u qaabilsan yahay baabuurta goboladda ,wuxuuna masuul ka yahay afar Caasi oo u kala baxda Shabeeladda dhexe iyo Shabeeladda hoose,wuxuuna Baabuur walba bishii ka qaataa lacag dhan shan boqol oo dollar.taas oo ah gelitaankooda garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Mr Manaan Khaat-ka loo qaado goboladda Labada Shabeelle wuxuu Jawaan walba ku leeyahay 15$ dollar,waxaana maalin walba ay qaadaan afarta Caasi, lixdan Jawaan oo khaat ah. taas oo ka dhigan inuu Cabdi Manaan maalin walba helo sagaal boqol dollar.
Cabdi Manaan wuxuu sidoo kale yahay u qaabilsanaha Canshuurta diyaaradaha Khaat-ka ee Wasiiru dowlaha Maaliyadda Mr Cabdullahi Maxamed Nur . wuxuuna diyaarad kasta ka qaadaa maalin walba lacag dhan 4800$ dollar. iyadoo maalin walba ay Garoonka Muqdisho yimaadaan 14 diyaaradood. waxeeyna lacagta uu maalin kasto qaado gaareeysaa 67200$ .
Cabdi Manaan wuxuu lacagtaan ku leeyahay maalin walba mushqaayad ama dalaal dhan 7200$ dollar laakiin lacagtaan uu helo wuxuu labadii biloodba mar ugu dalxiisaa Ethiopia ,Kenya iyo Uganda.
Dhinaca kale, Gudigga khaatleeyda Xamar waxaa ka dhex biloowday khilaaf cusub kadib markii Mursal Maxamed Fuje oo ka mida uu diiday in Khaat-ka u soo dego Ganacsade Cabdullahi Jiis lagu celsho Garoonka ama laga qaado lacagta baadda hasse yeeshee waxaa qadiyadda Mursal Fuje ka hor yimid Gudoomiyaha gudiggaas Qooje Maxamuud Qeeyliye.
La yaabka wuxuu yahay in Qooje Maxamuud Qeeyliye uu adeer u yahay Ganacsadaha uu rabo in khaat-kiisa la qalajiyo ama lacag baadda uu bixiyo.
Sikastaba ha ahaatee,Khaatka oo halis geliyay dhaqaalahii Somalia waxaa muuqato inuu sababi doono colaad ama burbur galaafta amaanka Dowladda Somalia,waxaana laga yaabaa in dhawaan la furo garoonka N50 si halkaas looga dejiyo.
Sikastaba ha ahaatee qeybta 2-aad waxaan ku qaadaa dhigi doonaa Qooje Maxamuud Qeeyliye iyo Maxamed Cismaan Cariif [Afdheere] Muroole ,iyadoo aan soo bandhigi doono muuqaaladooda iyo sideey musuqmaasuqa uga macaasheen laakiin waa kuma Qooje Qeeyliye?
Halkaan ka daawo warbixin maqal iyo muuqaala Musuqmaasuqa iyo baadda ay gudigga ku kaceen .
[Daawo] farxadda Shacabka Galkacyo oo ciyaartii ugu adkeeyd dhexmartay
Daawo farxadda Shacabka Galkacyo oo ciyaartii ugu adkeeyd dhexmartay Full Article
[DHAGEYSO: ]Farmaajo" Maxaabiista iyo Dadka Musuqmaasuqa ku Kaca waxaan ku fali Doonaa Beeraha"
[Daawo] Colaadii ugu xumeeyd oo beesha isaaq ka dhex curatay
Daawo Colaadii ugu xumeeyd oo beesha isaaq ka dhex curatay Full Article
[Daawo wardegdega] iyo kacdoonka Xamar ka curtay oo odayaashii soo xulay Baarlamaanka qasbay
Daawo wardegdega iyo kacdoonka Xamar ka curtay oo odayaashii soo xulay Baarlamaanka qasbay Full Article